Sida loo isticmaalo Canva: waa maxay iyo sida loogu qaabeeyo Canva Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Qalabka Naqshadeynta, Khayraadka
Canva waa aalad naqshadeysan oo la yaab leh, aadna u fudud in la isticmaalo taasina waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho natiijooyin xirfad leh, xitaa haddii aadan khibrad badan lahayn. Mashruucan waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo Canva meel xoq ah markaa waxaad bilaabi kartaa inaad ku raaxeysato dhammaan ilaha ay bixiso. Ha moogaan!
1 Waa maxay Canva?
2 Halkee laga helaa tusaalooyinka Canva
3 Moodooyinka ugu fiican ee Canva
3.1 Template loogu talagalay isticmaalka shakhsi ahaaneed
3.2 Moodooyinka warbaahinta bulshada
3.3 Mawduucyada ganacsiga
4 Bangiga sawirada, fiidiyowyada, astaamaha iyo sawirada
4.1 Fiidiyowyo iyo sawirro
4.2 Shaandhaynta iyo Saamaynta
4.3 Qaabab, astaamo iyo sawirro
5 Jaantusyada laga heli karo Canva
6 Noocyada nooca qoraalka iyo midabbada midabka leh
7 Su'aalaha qaarkood ee ku saabsan Canva
7.1 Sideen ugu abuuri karaa koontadayda Canva?
7.2 Ma ka wanaagsan tahay in lagu shaqeeyo sheybaarro ama laga bilaabo xoq?
7.3 Sideen ku badbaadin karaa naqshadahayga?
Waa maxay Canva?
Canva waa a qalab loogu talagalay naqshadeynta qaybo ka kooban, waa qalab bilaash ah Laakiin sidoo kale waxay bixisaa nooca Pro, haddii aad bixiso khidmad ah qiyaastii 9 euro bishiiba. Inkasta oo faa'iidooyinka ay bixiyaan nooca bilaashka ah ay kugu filan yihiin oo aad sameyn kartid waxyaabo badan.
Mid ka mid ah qodobada wanaagsan ee qalabkani waa marka lagu daro Webka, Waxay leedahay nooc app ah oo loogu talagalay IOS iyo Android, si aad uga heli karto una tafatirto naqshadahaaga kombiyuutarkaaga iyo taleefankaaga gacanta.
Waa a qalab ku habboon in lagu abuuro nuxurka shabakadahaaga bulshada, haddii aad leedahay astaan ​​ganacsi ama haddii ay yihiin shabakado shaqsiyadeed. Laakiin sidoo kale waa kheyraad wanaagsan oo lagu abuuri karo waxyaabo caan ah, sida sawir-qaadis ama bandhigyo.
Halkee laga helaa tusaalooyinka Canva
Iyagu waa ilaha ugu awooda badan Canva. Labada abka iyo shabakadda labadaba, waxaad kaheli doontaa tiro aan xadidneyn oo arrimo ah inay kuu oggolaanayaan si dhakhso leh u soo saar waxyaabaha, maxaa yeelay waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad mid dooratid oo aad sawirrada iyo qoraallada ku beddesho mid aad iska leedahay.
Si aad u sameysid qaab-dhismeedka oo sifiican ula jaan qaada waxyaabahaaga, waxaad had iyo jeer wax ka beddeli kartaa qaar ka mid ah cunsurrada iyo midabada naqshadeynta
Moodooyinka ugu fiican ee Canva
Template loogu talagalay isticmaalka shakhsi ahaaneed
The arrimo kuu oggolaanaya inaad abuurto resume soo jiidasho leh oo ku habboon baahidaada. Canva waxaad ku haysaa naqshadaha CV-ga ee dhammaan noocyada iyo midabbada, sidaa darteed talo soo jeedintaas oo aan had iyo jeer ka dhigno si aan ula qabsanno naqshadda CV-gaaga shaqada aad ku dalbanayso qalabkan ayaa joojin karta inay noqoto riyo-cabsi.
Waxaad leedahay naqshad yar iyo naqshad aad u faahfaahsan. Xusuusnow in tusaalooyinka wax laga beddeli karo sidaa darteed haddii aadan ku qancin midabka, tusaale ahaan, laakiin haddii naqshadeynta, marwalba waad beddeli kartaa.
Kheyraad kale oo aan aad u isticmaalo ayaa ah arrimo la sameeyo qorshaynta iyo kalandarka. Waad habeyn kartaa iyaga waana qalab aad u wanaagsan oo lagu abaabulo usbuucaaga, bishaada ama maalintaada.
Moodooyinka warbaahinta bulshada
Shabakadaha bulshada waxaad ku leedahay dhammaan noocyada arrimo, waad ka abuuri kartaa sheekooyin wax badan oo la yaab leh oo loogu talagalay Instagram si loogu dhejiyo quudinta, loogu dhajiyo Facebook ama fiidiyowyada TikTok iyo Reels. Sidoo kale waa mid xiiso leh, kheyraad ahaan, tusaalooyinka ay bixiso si loogu abuuro thumbnails fiidiyowyada YouTube ama tusaalooyinka loogu talagalay inay ku soo saaraan firfircooni ka qaybqaadashada shabakadaha bulshada iyo sahaminta.
Waxa ugu fiican ayaa ah haddii, tusaale ahaan, aad u abuureyso waxyaabo adiga kuu gaarka ah feed laga bilaabo instagram, Canva waxaad ku hubin kartaa inaad ilaaliso wada noolaanshaha iyo qaabka dhammaan qoraaladaada. Haddii aad aamminsan tahay dhammaan feed Isla dukumintigaas, waxaad awoodi doontaa inaad aragto sida jajabku u wada dhaqmayo waxaadna awoodi doontaa inaad ku dalbato midab isku midab ah dhammaantood.
Canva waa qalab si fiican u ansax u ah goobta shaqada, Waxay u ogolaataa abuuro waxyaabo xirfad leh. Ganacsi maalmeedka, tusaalooyin loogu talagalay samee bandhigyo Iyagu waa lagama maarmaan, waxay kuu oggolaanayaan inaad abuurto naqshad xirfadeed iyo muuqaal soo jiidasho leh oo la socon doonta kuna dari doonta qiimaha bandhigyadaada.
Arimaha aqoonsiga muuqaalka shirkadaha, Canva waa barnaamij ku habboon bilowgayaasha raadinaya tayada. Waxaad u haysaa arrimo isaga ah naqshada astaanta, wax aasaasi u ah buuga aqoonsiga muuqaalka nooc kasta.
Bangiga sawirada, fiidiyowyada, astaamaha iyo sawirada
Canva qalab aad u dhameystiran. Gudaha webka, wuxuu leeyahay bangi ay ku dhexjiraan sawirro, fiidiyowyo iyo ilo muuqaal ah, si aad ugu darto sawirrada keydka, fiidiyowyada, qaababka, astaamaha iyo sawirrada, xitaa uma baahnid inaad ka baxdo barnaamijka, in kasta oo iska cad, waad awoodi kartaa, waxay kaloo kuu oggolaaneysaa inaad soo dejiso ilaha dibadda.
Fiidiyowyo iyo sawirro
Haddii aad ogaato, kheyraadka qaarkood waxay ku xiran yihiin rukunka, laakiin wali, waxaad haysataa ilo ku filan oo bilaash ah si aad naqshadahaaga uga dhigto mid muuqaal iyo soo jiidasho leh.
Si aad ugu darto sawiro iyo fiidiyow waad riixi kartaa si toos ah oo uga muuqda bartamaha template, ama waad jiidi kartaa si aad ugu dhejiso looxyada sawirka horey loo abuuray. Si aad u cabirto oo aad wax uga beddesho dalagga sawirka kaliya waa inaad laba-jibbaartaa oo guurisaa illaa ay ka jeceshahay.
Shaandhaynta iyo Saamaynta
Canva gudaheeda, waxaad sidoo kale ku codsan kartaa miirayaasha iyo saameynta sawirada si ay kaaga caawiyaan inaad u dhigantaan qaabka sawiradaada.
Qaabab, astaamo iyo sawirro
Waxaa loo geliyaa si la mid ah sawirrada, aad ayey u xiiso badan yihiin inay siiyaan macluumaad dheeri ah waxyaabaha ku jira iyo in la xoojiyo fikradaha, laakiin sidoo kale in lagu daro walxaha qurxinta naqshadahaaga.
Qaybaha canaasiirta, waxaad sidoo kale ku dari kartaa looxyo muuqaal ah oo aad goor dambe ku dari karto waxyaabaha ku jira. Aad waxtar u leh abuurista sheybaaradaada.
Jaantusyada laga heli karo Canva
Laga soo bilaabo guddiga waxyaabaha waxaad ku dari kartaa shaxanka fudud dukumiintiyadaada ku yaal Canva. Waxaad haysaa dhowr nooc oo la heli karo: bar, toosan, wareegsan, kala firidhsan ...
Waad tafatiri kartaa oo si toos ah xogta ugu geli kartaa Canva, markaad dhex gasho bogga, xaashi yar oo furan ayaa ka furi doona dhinaca bidix ee barnaamijka si aad sidaas u sameyso.
Noocyada nooca qoraalka iyo midabbada midabka leh
Canva waxay ku siineysaa noocyo kala duwan oo midabyo kala duwan ah iyo noocyo-xayeysiis ah si aad u doorato midka ugu fiican ee naqshad kasta. Si aad u hesho iyaga u gal dhinaca dhinaca, badhanka «inbadan»> «qaabab».
Haddii aad naqshadeynayso dukumiinti maran oo aadan adeegsan doonin wax shax ah, Midabbada midabka leh ee 'Canva' ayaa kaa caawinaya inaad doorato nidaam midab leh oo iswaafajinaya. Sidoo kale, markaad gelineyso sawir, midabada midabka leh ee sawirkaas ayaa ka muuqda xulashooyinka midabka, sidaas darteed waxaad ku dooran kartaa sawirro leh joornaal la mid ah ama waxaad midabadaas siin kartaa qaybaha kala duwan ee dukumintiga.
Sida farta qoraalka loo qoro, waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in kaliya aysan ku siineynin inaad ku hesho noocyo fara badan, waxay ku siinayaan fikrado noocyo isku dhafan oo waxashnimo ah.
Su'aalaha qaarkood ee ku saabsan Canva
Sideen ugu abuuri karaa koontadayda Canva?
Si loo abuuro koonto cusub Canva, waa inaad ka gudubtaa oo aad gujisaa «diiwaanka» (midigta, xagga sare ee shaashadda).
Waxay ku siin doontaa ikhtiyaarka aad iskaga diiwaangelin karto koontadaada Google, Facebook ama email ahaan. Xulo xulashada aad doorbideyso waxaadna diyaar u tahay inaad bilowdo inaad ku raaxeysato Canva.
Ma ka wanaagsan tahay in lagu shaqeeyo sheybaarro ama laga bilaabo xoq?
Waxay kuxirantahay, Waxay kuxirantahay hadba sida ay kuugu cadahay naqshadeynta, waqtiga aad rabto inaad u hurto iyo khibradaada. Had iyo jeer waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku naqshadeyso dukumiinti maran, waxaad abuuri kartaa qaybo waaweyn oo ka bilaabaya xoq. Laakiin macnaheedu maahan inay ka xirfad yar tahay la shaqeynta sheybaarada, sheybaarradu waa kheyraad aad u weyn, oo waqtiga ilaaliya iyo inay kuu jiraan si aad uga faa'iideysato.
Sideen ku badbaadin karaa naqshadahayga?
Ha waalin adigoo raadinaya batoon si aad u badbaadiso isbeddeladaada ku dhaca Canva, maxaa yeelay qalabkani si toos ah ayuu u badbaadiyaa intaad dukumintiga wax ka beddeleyso.
Sí waxaad kala soo bixi kartaa naqshadaha kombiyuutarkaaga, adigoo riixaya badhanka «soo degsada» dhinaca midig ee shaashadda Xitaa waad keydin kartaa bandhigyadaada sida feyl PowerPoint ah!
Ugu dambeyntii, xusuusnow taas Canva wuxuu u shaqeeyaa sida daruurta oo kale. Waxaad ka heli kartaa naqshadahaaga aalad kasta oo aad gasho Waxaad u baahan tahay oo keliya qadka internetka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Sida loo isticmaalo Canva: soo ogow waxa ay tahay iyo sida loogu qaabeeyo Canva